HERY RAJAONARIMAMPIANINA : Maintirano sy Morondava indray no hanatanterahany praopagandy mialoha ny fotoana
Tsy miafina intsony ny fampielezan-kevitra tanterahin’ny antoko Hvm tato ho ato. Fantatra fa omaly maraina no nigadona tao amin’ny Distrikan’i Maintirano ny Filohan’ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina. 21 novembre 2017
Araka ny vaovao azo dia nametraka tamin’ny fomba ofisialy ireo fitaovana natolotry ny Bngrc, toy ny fiara mpamonjy voina 1, mpamono afo 1 fandraofana fako 1, izay tonga tany an-toerana ny 5 novambra lasa teo. Taiza ny Filoha nandritra ny fotoana nipetrahany teo amin’ny toerany tsy nanolotra ireo fitaovana ary tsy ireo akory no andrasan’ny mponina aminy fa ny fitadiavana vahaolana amin’ny firongatry ny tsy fandriampahalemana any an-toerana izay marefo dia marefo tokoa ankehitriny.
Voalaza ihany koa fa nidina tany amin’ny Kaominina Betanana ny Filoha ary mampanantena ny fahavitan’ny Barazy izay efa nolazainy tamin’ny fitsidihany tany an-toerana farany fa tsy maintsy hovitaina. Kinanjo mbola tsy nisy fotodrafitrasa nipetraka akory hatramin’izao, raha ny vaovao voaray ihany. Niraradraraka indray koa ny fampanantenana poakaty nandritra ny kabary nataony tany an-toerana, omaly fa ho vita avokoa ireo toho-drano telo ireo. Mametra-panontaniana ny mpanara-baovao hoe ho vita mialoha ny fifidianana izany hoe fotoana ipetrahany amin’ny maha Filoha azy ihany ve ireo fotodrafitrasa ampanantenain’ny mponina ao amin’ny Distrikan’i Maintirano io ? Nefa ireo toho-drano dia tena miasa amin’ny mpamboly any amin’io Kaominina satria Faritra azo lazaina mamoka-bary ihany koa ny Faritr’i Melaky iny.
Ny alarobia izao kosa no fantatra fa hihazo an’i Morondava ny lehilahy sy ireo delegasiona hoentiny. Voalaza fa handeha hitokana ny biraon’ny Dren vaovao no anton-diany any an-toerana. Manoloana ny fahatongavany hitsidika io renivohitr’i Menabe io izany dia izay vao mikoropaka miseho manadio tanàna ny Kaominina nefa tamin’ny fotoana namparesaka ny fiparitahan’ny valan’aretina pesta teo tsy nisy akory ny fanadiovana tao an-toerana.
Tao anatin’ny telo andro dia nikoropaka nanao antso fampandrenesana tamin’ny haino aman-jery ao an-toerana ireo tompon’andraiki-panjakana fa ho tonga ny Filoham-pirenena. Omaly antoandro tao anatin’ny hafanana nigaingaina iny tao Morondava dia nanadio ny tanàna ireo mpiasan’ny Kaominina. Miandry ny vahaolana hoentiny amin’ny fanarenana ny tsy fandriampahalemana ny mponina ao Morondava amin’io fotoana voalaza fa hahatongavan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina io.
Napetaka tao amin’ny toeran’ny kandida faha-13 ny afisin’ny faha-14 FANAHINIANA SA TSY FAHAMATORANA ? (186) 11 octobre 2018 Hiara-dia sy hampandany ny kandidà Andry Rajoelina n°13 DEPIOTE HARIJAONA RANDRIARIAMALALA (185) 11 octobre 2018 Votsotra ny menoty rehetra natao taminy BEBETO JIOLAHY RAINDAHINY AO TOAMASINA (175) 13 octobre 2018 Nandresy lahatra ny mponin’Itasy FILOHAN’NY ANTOKO MMM – FREEDOM - MAITSO (117) 15 octobre 2018 Nisy nikasa hanakantsakana ny fandalovan’ny kandidà Andry Rajoelina NOSY BE (113) 15 octobre 2018 Lehilahy miisa 3 no voasambotry ny zandary VONO OLONA FENO HABIBIANA TENY TANJOMBATO (112) 13 octobre 2018